Muxuu Louis Van Gaal ka yiri mustaqbalkiisa kaddib hanashadii FA Cup? – Gool FM
Muxuu Louis Van Gaal ka yiri mustaqbalkiisa kaddib hanashadii FA Cup?
Kaafi May 22, 2016
(Manchester) 22 Maajo 2016. Louis Van Gaal waxa uu diiday in uu ka hadlo wararka la xiriira mustaqbalkiisa iyada oo ay xoogeysaneyso xanta ah in Jose Mourinho la magacaabayo.
Marka laga yimaado guushii uu FA Cup-ka ka gaaray, hadana Sky Sports News waxa ay sheegeen in lagu badali doono Jose Mourinho.
Laakiin, mar uu saxaafada la hadlayey kaddib kulanka, Van Gaal waxa uu aad u amaanay koobka isaga oo saxaafada hor taagan – wuuna diiday ka hadalka in kulankaas ahaa kiisii ugu dambeeyey.
“Waan idin tusay koobka ma ahi mid la gorfeeya mustaqbalkiisa saaxiibadiisa saxaafada, kuwaas oo lix bilood kahor shaqada iga eryey,” ayuu yiri.
“Kaa tababarehee kale ee sidaas sameyn lahaa? Ma rabo in aan ka hadlo bixitaan.”
Jesse Lingard ayaa dhaliyey gool dhul ma dhacdo ah oo xajiib ah taas oo kooxda dhaxal siisay biladii ugu horeeysay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay Sir Alex Ferguson, hadana guushaas waxaa hareeysay wararka la xiriira mustqabalka Van Gaal.
Ninka reer Holland waxa uu ku faanay in uu sameeyey arin ugu dambeeysay 2004 halyeygii Manchester ee Sir Alex Ferguson.
“Waxaan sheegay markii aan shaqadan tababare bilaabay in aan ku jirno KMG,” ayuu Van Gaal yiri. “Taas marar badan ayaa sheegay marka aan shirarka jaraa’id qabto.
“Waxaan ku qasbanaa in aan cusbooneysiiyo safafkeyga waana sameeyey iyada oo ay dhaawacyo badan jireen. Kooxda shanaad ayaan nahay hadana koox ayaan kor u qaadnay.
“Waa koob, koobna waxaa United ugu dambeeyey sadex sano kahor. Waxaan ku faraxsanahay in aan noqdo tababarihii ugu horeeyey ee koob qaada kaddib Sir Alex Ferguson. Sawir ayaan la galay, taasna waa taariikh.’
Mar la weydiiyey in uu sii joogi doono United xilli ciyaareedka dambe, Van Gaal waxa uu yiri: “Saddex sano oo heshiis ah ayaan saxiixay mana ogaan kartid.”
Daawo: Jorge Mendes oo xaqiijiyey in uu u duuli doono Manchester
BBC: Louis Van Gaal waxaa la eryi doonaa isniinta halka Jose Mourinho la magacaabi doono salaasada